Fuleco, Biby Famantarana Fifaninanan-Dalao Mampisara-tSaina an’i Brezila · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Desambra 2012 15:37 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, বাংলা, Português, Italiano, Français
Nisy fanentanan-tsafidim-bahoaka notohanan'ny Coca-Cola manasa ny mpiserasera breziliana hisafidy ny anaran'ny biby famantarana [mascotte] amin'ny mondialy 2014, tatò, biby kely andalan'ny ho ripaka any an'ala breziliana. Ny mampiavaka ity biby kely ity dia ny fananany hoditra mafy dia mafy sy afa-miforitra amin'ny tenany ahafahany miaro tena, ka nahatonga ny anarany hoe Tatu Bola…Tatò Baolina.
Fanentanana hita internet, mampahatsiahy ny voasoratra ao amin'ny Cité de Dieu :” Fuleco, ny vodiko! Zé kely no anarako!” . Saiitatr'i Odes ao amin'ny Belo Horizonte de A à Z – valam-bahoaka
Amin'ny mpifidy 1,7 tapitrisa, 48% no nifidy Fuleco, eo alohan'i Zuzeco (31%) sy Amijubi (21%).
Ireo tolotr'anarana telo ireo dia nofaritan'ny vaomiera ahitana an'i Bebeto (mpilalaon'ny ekipam-pirenena breziliana teo aloha), Arlindo Cruz (mpihira sy mpanatontosa samba), Thalita Rebouças (mpanoratra sy mpanao gazety), Roberto Duailibi (mpanao dokambarotra) ary Fernanda Santos.
I Tatò Baolina (Tatu Bola) araka ny iantsoan'ny ankamaroan'ny Breziliana azy no tena mahazo fankasitrahana indrindra ao amin'ny firenena araka ny hita ao amin'ny habaka ofisialin'ny biby famantarana.
Hoy ny fanamarihan'ny habaka:
Ny biby famantarana ofisialy, izay iray amin'ny ambasadera hita indrindra mandritra ny fifaninanana ankoatra ny maha-biby arovana azy, no hitana andraikitra lehibe amin'ny fanentanana ny olona amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny anarana Fuleco™ tokoa manko dia avy amin'ny fanambàrana ny voambolana breziliana futebol sy ecologia ; izy no famantarana hita maso eo amin'ny mondialin'ny FIFA™ fa azo ampiarahana ny football sy ny ekolojia sy fandrisihana ny olona hitondra tena ho tompon'andraikitra manoloana ny planetantsika. Nasehon'ny Breziliana tamin'ny fifidianana ny anarana Fuleco™ mazava ny fankafizany ireo petra-kevitra roa ireo.”
Saingy nohozongozonin'ny ankamaroan'ny Breziliana io safidy anarana io. Raha tafita tsara ny hafatra tiana ampitaina, dia nampalahelo ny olona kosa ny safidy tsy matotra nataon'ny FIFA.
Hita tokoa manko fa tarehin-tsoratra roa monja ny fuleco dia lasa fuleiro. Any nordeste, ny dikan'izany dia hoe mpandainga, kamo ary any atsimo-atsinanana, fuleiro dia manondro zavatra tsy misy lanjany. Fuleco dia mampahatsiahy ihany koa ny hoe furreco izay midika hoe tena ratsy, tsy misy dikany.
“Aza manao izay mampahamenatra anay! Tsy mila Amijubi, Fuleco na Zuleco izahay. Ny anarany dia Tatu Bola! avy amin'i Juventude Sustentavel hita facebook nahazoana alalana
Amin'ny tenin-jatovo, fuleco dia mitovy dika ihany koa amin'ny lava-pitombenana, sy mitovy fampiasa amin'ny tenintsika hoe v*dy araka ny itateran'ny mpiserasera mandray anjara amin'ny rakibolana portiogey tsy ara-drafitra azy [pt].
Azo ampiasaina manokana amin'ny Fuleco ny kilalaon-teny: fudeco (ilay manao), fumeco (ilay mifoka)…
Noho izany, ratsy toerana ihany ny Fuleco. Maro ny Breziliana naneho ny hatezerany amin'ny tambajotra sosialy, tahaka ny Facebook na Twitter. Misy kisarisarim-panesoana an'i Fuleco nifampizarana in'anarivony maro miaraka amin'ny fizaràn-kevitra ho menatra, tezitra, malahelo, tahaka izay hita ao amin'ny city pejy manokana ho an'ilay biby famantarana[pt].
Nisy aza moa ny fanentanana hangataham-panovàna ny anaran'ilay “mascotte”, ka manolo-kevitra ny hanome anarana azy ho “Tatu Bola”.
Nisy fanangonan-tsonia [pt] efa nahavoriana sonia mihoatra ny 39 000. Takiany:
Raha nosafidiana noho ny bikany fa tsy noho ny anarany ny Tatò Baolina, nahoana ny “mascotte” tsy nantsoina fotsiny hoe…Tatò Baolina?
Ny tena mampihomehy amin'ity tantara ity dia anarana 47 natolotry ny sampan-draharaha breziliana 6 no nofakafakain'ny komity mpanomana (COL) sy ny Federasiona iraisam-pirenena Baolina Fandaka (FIFA) ary ny fifampiresahana tamin'ny ankizy 5 ka hatramin'ny 12 taona, ireo tena kinendry, no nanaovany io safidy io.
Farafaharatsiny tonga tamin'ny tanjona nokendreny ve ny mpikarakara : hampihomehy mandritra ny fotoana fakan-drivotra !